Omeo izao ary ovao ny fiainan'ny mpianatra »Hodges University
OVAO NY TONTOLO IZAO
Mpitsabo mpanampy, Mpandray an-tanana voalohany, Mpitondra vondron'olona. Ny fanomezana iray dia afaka manova fiaraha-monina amin'ny taona ho avy.
Mamorona tontolo iray reharehanao! Miaraha aminay anio amin'ny fanomezana ho an'ny tahirim-bola tianao indrindra.
Manaova fanomezana. Manaova tsy fitoviana.
Miova isan'andro ny tontolontsika amin'ny fanitsiana sy fanovana ny ezaka ataontsika ho avy mba ho lasa mahazatra "vaovao". Ny tsy fahazoana antoka ny amin'ny ampitso izay mety ho tolona sarotra indrindra.
Fantatsika fa fotoan-tsarotra ireto, fa amin'ny alàlan'ny fifanampiana dia afaka manohy manao fanovana isika eo amin'ny tontolontsika.
Ny fanomezana anao dia afaka manisy fahasamihafana sy manova ny fiainan'ireo mpianatsika.
Zava-misy tokony ho fantatra momba ny Oniversite Hodges
Hodges University dia reharehan'ny isan'ny mpianatsika isan-karazany.
Izahay dia orinasam-panompoana Hispanika voatendry federaly, miaraka amin'ny 44 isan-jaton'ny mpianatray no fantatra fa Hispanika. Saika ny 62 isan-jaton'ny mpianatsika dia vehivavy, ary ny 12 isanjaton'ny mpianatsika dia miaramila efa adidy na miaramila. Ny salanisan'ny taonan'ny mpianatray dia 33 izay miasa amin'ny asa manontolo andro ny ankamaroan'ny mpianakavy.
Misy fiantraikany tokoa ny fanomezanao.
Fomba hafa hanohanana ny oniversite Hodges
Manolotra fomba isan-karazany azonao ampiasaina hanehoana ny fanohananao ny mpianatry ny Oniversiten'i Hodges izahay. Manome fahasamihafana ny fanomezana rehetra. Ny ekipanay dia faly koa hihaona aminao hanamboatra ny fanomezanao.
Talen'ny fandrosoan'ny oniversite